Nhamo Kune Iwe Kana Usati Usingazivi Kuita Sei Ne Email Virus! - Semalt Safety Tips
Chero ani zvake ane kero ye email anotarisana nehutachiwana hwehutachiona asi kutaridzika kwekuchengetedzwa kwetenternet kunogona kubatsira zvikuru kuderedza izvi. Pamusana pekuwedzera kwezviitiko zvekunyorwa kwekombiyuta, zvinokosha kuti urambe wakangwarira nezvekuchengetedzwa kweterevhizheni. Hapana kana rimwe hwindo remukana rinofanira kusara kune vanopomerwa ne-cyber. Kuparadzira mavairasi kuburikidza nemamerica zvingasava pakati penzira dzinowanzoshandiswa zvikuru mazuva ano, asi kuchine mukana wokuti unogona kushandiswa kupfuurira kurwisa.
Maererano naFrank Abagnale, we Semalt Mutungamiri Wekubudirira Kwevatendi, zvakakosha zvikuru kuziva maitiro ekuita zuva rega rega kudzivisa mavhesi ese anogona kupararira kuburikidza ne email.
Nzira dzekudzivirira utachiwana hwehutachiona kuburikidza ne email
1 - gerenciador financeiro]. Kuudzwa nezvekuti ma virus anowanikwa sei
Indaneti inoramba ichingokura uye ndizvo zvinoita hutachiona uye malware 'indasitiri.' Kakawanda, vanhu vanoita zvepabonde vanoshandisa nzira dzinenge dzichangobva kuitika kana avo avo vakambokanganwa kubata vanhu vakashamisika. Kuti urege kubatwa usingazivi, ingoziva chete nzira dzemazuva ano dzokutora kuitira kuti uzive kuti ungazvidzivirira sei.
2. Usaisa email yako kune chero webhusaiti
Kune nzvimbo dzakawanda dzakaipa dzinoedza kubata vanhu mumavirusi uye mamwe mhirizhonga yepyber. Kuti udzikise mikana yekuzvidzivirira iwe uye chigadziro chako kune utachiona hutachiwana, usarega kupa email yako kero pazviwe zvausingazivi. Uye kana iwe uchida kupa iyo kero ye email, ona kuti webhusaiti yacho yakanyorwa.
3. Chengetedza utachiona hwehutachiona hwehutachiona hunovandudzwa
Chengetedza nguva dzose kuti uone kuti anti-virusi yako inovandudzwa. Iwe unogona kuisa software yekugadzirisa motokari kuitira kuti pasina rimwe zuva iyo anti-virusi isiri yezuva (iyo inoreva kuti kuwedzererwa kune mavairasi).
4. Shandisa musikana akachengeteka
Kushandisa nzvimbo dzakachengetedzwa zvakanaka kuti uwane email yako inyaya yakanaka. Hausi wega unofarira ruzivo rwakanaka rwekutsvaga asi unobatanidza zvose zvingaita kuti utachiona hupararire. zvigadziro pane iyo browser. Zvirongwa izvi zvinosanganisira kudzivirira musikana wacho kubva pakuwana zvinhu zvakaoma, kusimba kwema email yako junk filter, etc.
5. Dzorera purogiramu yekumbotarisa email pa
Kana izvi zvichishandurwa, unogona kuona zvinyorwa kunyange pasina kuvhura email. Nokudaro iwe unogona kuona kuti ruzivo rwakanyorwa mune email runochengeteka usati watanga email. Imeyeri maitiro akaita se Outlook anopa izvi.
6. Chengetedza DONTs dzekunyunyuta emaimeri
Mazano emajeri ndeaya emaimeri anobva kune zvisingazivikanwi, kunyora maail emails (avo vanokumbira ruzivo rwemunhu oga), kana avo vane chikwata chinoshungurudza kana chibatanidzwa.
Nemaeils kubva kune zvisingazivikanwi:
HERE usati wazarura zvinyorwa zvacho kana kuti chengeta chero hutano huri mune email
NEVER download chero zvakasungirirwa
Kana wakatotora chikwangwani, usachizarura kusvikira ichiongororwa mavirusi.
Kuti uwane email, usatotambudza kuzarura kana kupindura. Iwe unenge uchangopedza nguva yako uye uchiwedzera mikana yekuwana kombiyuta yako ine utachiona nemarware.
Mamwe maimeri anouya nemashoko ayo kombiyuta yako inotapukirwa. Usavimba navo pakarepo. Chengetedza kaviri iyo yekombiyuta yako uchishandisa software yako yekare kare usati waenderera mberi ne email. E-mail dzakadaro zvinowanzodiwa kuti uone chibvumirano kana kuzarura chibatanidzi chinoratidzirwa se "mhinduro," asi iyo Trojan iri muchokwadi chaiyo.
7. Bvisai mifananidzo yenyu yekusvinura uye kakawanda kakawanda
Cookies inochengetedza ruzivo rwekutsvaga kwako kuitira kuti zvive nyore uye zvinokurumidza kudzorera zvakare mapeji ewebhu akashandiswa. Kunyange zvakadaro, zviduku zviduku zvemashoko zvinogona kushandiswa nemafungiro asina kunaka kuti uwane iyo email yako kero. Kuzvichenesa ndiyo nzira yakanakisisa yekuderedza dambudziko rekuisa pachena email yako kune avo vanopara mhosva.
Munyaya dzekuchengetedzwa kweterevhizheni, nguva dzose ndiyo yakanakisisa kushandisa sarudzo yako yakanakisisa kana uchipa chero ruzivo kana kana iwe uchigamuchira email. Kana pane chimwe chinhu chinokuita kuti unzwe usina chokwadi pamusoro peimwe email, iwe zviri nani kuti urege kuzarura kana kuchenjerera kana uchizarura. Kutevera injini kuchengetedza mirayiridzo inogona kunge isiri nzira yakasimba yokudzivisa kuwana hutachiwana kuburikidza ne email, asi inogona kuderedza kutsvaga kune aya mavhesi zvikuru.